संविधान मिच्नेले निर्वाचन गराउछन् भनेर पत्याउनेलाई रामराम मात्रै भन्न सकिन्छ : नेता सिंह
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तानशाही शासन तन्काउन निर्वाचनको घोषणा गरेको बताएका छन्। कांग्रेस प्रतिनिधीसभा विघटन विरुद्ध गरेको देशव्यापी प्रर्दशनको क्रममा कास्कीमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै नेता सिंहले ओलीले नहुने निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको बताएका हुन्।
‘उनले तानशाही शासन तन्काउन हुनै नसक्ने चुनाव घोषणा गरे। शासन लम्बाउन कसैलाई प्रलोभनमा फसाउन सकिन्छ कि भनेर उनले चुनावको चाल चलेका हुन्,’ सिंहले भने।
उनले अदालतले प्रतिनिधीसभा पुर्नस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ। अब न्यायमूर्तीहरुले न्याय दिँदा संविधानको व्यवस्था र भावनालाई हेरेर दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गरे।
त्यो बेला अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो। अहिले पनि असंवैधानिक ठहर गर्ने विश्वास छ। हिजो पनि सेटिङको कुरा थियो, आज पनि छ। तर सर्वोच्चले आफ्नो गरिमा कायम गर्ने गरि निर्णय गर्नेछ।’
पुर्नवहाली भयो भने नेपालको राजनीतिक नेपालकै हातमा रहने तर विघटन सदर भयो भने मुलुकमा शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल बढ्ने उनको भनाइ छ। उनले संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष चेक एन्ड व्यालेन्स भएको भन्दै। कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका माथि प्रहार गर्दा न्यायपालिकाले सच्चाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले संविधान मिचेका ओलीले चुनाव गराउँछ भनेर पत्याउछ भने त्यसलाई रामराम मात्र भन्न सकिने बताए।
‘संविधान मिच्ने ओलीले निर्वाचन गराउछन् भनेर पत्याउनेलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ। नेकपाले जनताको मतको अवमूल्यन गरेको छ,’ उनले भने, ‘मै कानून हुँ, मै संविधान हुँ भन्ने ओलीको एक दिन राजा ज्ञानेन्द्रको झै हालत हुनेछ।’
‘हामी सांसद पद छोड्छौं, ओलीलाई छोड्दैनौं’
मैले भनेको नमान्ने पूर्व एमालेलाई कारबाही गर्छु : ओली
प्रचण्ड-नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक सर्‍यो
ज्योती लाईफको आईपीओमा साढे ११ लाखभन्दा बढीको आवेदन
महिला स्वतन्त्र र सशक्त नभएसम्म देशको समृद्धि सम्भव नै छैन : उपराष्ट्रपति पुन
बार्सिलोनाको अध्यक्षमा लोपार्टा निर्वाचित
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस : विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना
ओली समूहको संसदीय दलको बैठकमा गौतम नजाने
विश्वप्रकाश शर्माको प्रश्नः विप्लव नेकपाले हतियार बुझाउने बुँदा खोइ ?
३६ वर्ष पहिले चोरी भएको मूर्ति अमेरिकाले बुझायो नेपाललाई
गृहमन्त्री थापालाई भेट्न मन्त्रीक्वार्टर पुगे विप्लव
आइतबारदेखि संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु
ओस्मान पक्राउ परेपछि सेनेगलमा हिंसा भड्कियो : चारको मृत्यु
सुनको मूल्य ह्वात्तै घट्यो, तोलाको कति ?
विप्लव नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्छ : मन्त्री ढकाल